Ngaphezulu kweNjini yokuKhangela yokuSebenzisa | Martech Zone
Ngaphezulu kweNjini yokuKhangela yokuSebenzisa
NgoLwesine, Aprili 29, 2010 NgoMvulo, Aprili 11, 2016 Douglas Karr
Izolo, ndenze uqeqesho ekusebenziseni iinjini yokukhangela kwaye ndamema abayili, ababhali beekopi, iiarhente kunye nabo bakhuphisana nabo ukuba beze kuqeqesho. Yayiyindlu epheleleyo kwaye yayihamba kakuhle.
Ukubekwa kwiinjini yokukhangela akusoloko kuyimpendulo-inkampani kufuneka ibe nomxholo osebenzayo, indawo enkulu, kunye nendlela yokuzibandakanya nenkampani.
Ndicinga ngokwam njengegcisa lokusetyenziswa kweinjini yokukhangela. Uninzi lweenkampani, ndinokwandisa iisayithi zazo okanye amaqonga, ndibanike ulwazi ngendlela yokwenza uphando lwamagama aphambili, kwaye ndibabonise indlela yokubonisa umxholo ngendlela eya kuqinisekisa ukuba bayafumaneka apho bafuna ukuba khona.
Njengoko ujonge ngaphakathi kumbutho wakho kunye neenzame zakho zokuSebenzisa iiNjini zoKhangelo, akukho sizathu sokuba ubuye nawe. Andikhathali nokuba ufunda kangakanani kwi-Intanethi malunga ne-SEO, okholelwayo ukuba ucinga ntoni, ucinga ukuba uyazi… awunayo into efunekayo ukuhambisa inaliti emva kwenqaku elithile. Uninzi lwabathengi endikhe ndasebenza nabo abanobuchwephesha be-SEO kwinqanaba elihle kakhulu lamagama aphambili- kodwa musa ukuguqula ngokufanelekileyo amathemba eneneni awenze kwindawo yabo.
Ukuba awunazo izixhobo zokusebenzisa i-elite firm, yeka ukungcungcutheka. Zininzi ezinye iindlela zokubeka kwindawo yokukhuphisana, enegama eliphambili levolumu ephezulu:
Unokuba ujolise kumsila omde, amagama aphambili afanelekileyo aphucula ngokwenene amaqondo akho okuguqula kuba akhokelela kumanani amancinci amathemba afanelekileyo.
Unokuba uphucula uyilo lwendawo yakho ukuze ubonakale njengombutho othembekileyo, othembekileyo, ophucula iifowuni zokuthatha amanyathelo, kunye namaphepha okufika-ukuphucula amaxabiso okuguqula ngokubanzi.
Unokuba uguqula umxholo wakho kwaye wenze Uvavanyo olwahluka-hlukeneyo, uvavanyo lwe-a / b / n novavanyo lokwahlulahlula ukuphucula amaqondo okuguqula amathemba ashiya indawo yakho.
Unokuphucula izihloko zamaphepha akho kunye neenkcazo zemeta ukuphucula ukubaluleka kwephepha lakho lokukhangela kwiinjini yokukhangela (SERP) ukwenzela ukuba abasebenzisi beenjini yokukhangela ngakumbi bacofe ungeniso lwakho kwiphepha leziphumo. Jonga eyakho cofa kwinqanaba le-Google Webmaster Central.
Unokusebenzisa ngokufanelekileyo imithombo yeendaba zentlalo kunye nentengiso ye-imeyile ukubandakanya, ukuphinda ubandakanyeke kunye nokuthengisa abathengi bakho-ukuphucula iziphumo zeshishini ngokubanzi.
Iinjini zokukhangela ziyeyona nto iphambili kwiinkampani ezisebenzisa iindlela zokuthengisa ngaphakathi ... kodwa oko akuthethi ukuba kuya kufuneka usebenzise bonke oovimba bakho ukuzama ukucudisa yonke i-ounce yokugqibela kuyo. Kuya kufuneka ubeke umzamo owaneleyo wokulandela ezona ndlela zilungileyo, kodwa uchithe ixesha lakho elongezelelweyo ngokukuko. Ukuba udidi lwamagama aphambili okhuphiswano lukhetho lwakho kuphela okanye unembuyekezo enkulu kutyalo-mali, tyala imali kwi ulungiselelo lweinjini yokukhangela njengathi, Highbridge. Ukuba imbuyekezo kutyalo-mali ayikho, jolisa ingqalelo kwiindlela ezizezinye eziza kunyusa iziphumo zakho zeshishini.
tags: UkuThengiswa kweMpahlaemail Marketingamagamaamagama angumsila omdeiinkcazo zemetaizihloko zamaphephaImidiya yokuncokolakuyilo web
Yintoni uMcebisi ngeNtengiso ye-imeyile kwaye ngaba ndiyayifuna?
Ngaba iSicwangciso seShishini esiBonakalayo sikulungele?
Epreli 29, 2010 ngo-12: 31 PM
Ngethemba ukuba abanye babaphuhlisi bewebhu abebezimase bafunde izinto ezimbalwa. Akukho nto ifana nokungena kwiiwebhusayithi ezixabisa umxhasi ama-5 amanani angenasihloko samaphepha okanye iinkcazelo zemeta ezenziwe kakuhle, okanye ezineeURL ezininzi zasekhaya. Kwaye enye into...abakhi bewebhusayithi abantu, musani ukwakha okanye ukuyihlaziya iwebhusayithi ngaphandle kokwenza uphando lwegama elingundoqo okanye kubekho umntu oyenzayo. Ngumba wokukhuthala.